30 qof oo ku dhaawacantay masjid kuyaala Garasbaaleey “Dhageyso” – Radio Muqdisho
Masjid ku yaala xaafadda Garasbaaleey ee degmada Dayniile ayaa ku soo dumay shaqaale ku howlanaa dib u dayactir lagu sameynayay masjidka, iyadoo ay ku dhaawacmeen 30 qof.
Dadka deegaanka ayaa ku howlan sidii dadka kale ee ku hoos jira bur burka looga soo bixin lahaa, waxaana la rumeysanyahay inay jiraan dad ku xaniban bur burka hoostiisa, maadaama masjidka uu yahay shub.
Guddoomiye Ku-xigeenka Arrimaha bulshada Degmada Dayniile Maxamed Cabdi Qaadir Cali ayaa Radio Muqdisho u xaqiijiyay dhacdadan.
Imaamka Masjiddu Al-Raxma ee xaafadda Garasbaaleey Maxamed Xaashi oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in masjidka ay ka socotay howlo dib u dayactir ah, isla markaana aan maalmahan lagu tukan.
“30 qof ayaa ku dhaawacantay, tiro kalena waxa ay ku hoos jiraan bur burka shubka ee Masjidka, kuwaasi oo qaarkood gudaha masjidka ka dhex ashahaadanayo, ciidanka booliska ayaa iminka na soo gaaray” ayuu yiri Imaamka Masjidka.
Halkan ka dhageyso Imaamka oo u warramay Wariyaheena Cumar Caaqil